Jaamacad ka mid ah kuwa ugu Tunka weyn Maraykanka oo Soomaalida ah ku dartay liiska jinsiyadaha caddaanka ah iyo Sababta. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home News Jaamacad ka mid ah kuwa ugu Tunka weyn Maraykanka oo Soomaalida ah...
Walwaal Online; “Jaamacadda California iyo dhammaan xarumaha waxbarasho ee ka qeyb qaata barnaamijyada samafalka ee ardayda ayaa codsaday in loo soo gudbiyo xog ku saabsan faraca jinsiyadeed ee ardayda dhigata waxbarashada ka sarreysa dugsiyada sare. Hase yeeshee xogta lagu qeexay ardaydaas waxay ka duwan tahay midda taariikhiga ah ee ay heyso Jaamacadda California, sababo la xidhiidha isbadalladii la sameeyay 2010-kii,” ayaa lagu yidhi qoraal ay jaamacadda ku daabacday boggeeda internet-ka.
Isku dayo aan u sameynay si aan ula xidhiidhno mas’uuliyiinta Jaamacadda, waxna ka weydiinno sida liiskaas loo diyaariyay, ayaa noo suuragali waayay.
Previous articlePUNTLAND oo diyaarisay xubnaha ku metalaya guddiga doorashada ee heer federaal
Next articleDalka France Oo 213 muslimiin wadankiisa ka tarxiilaya iyo sifaha uu cuskaday.